Loholona Velontsara Paul Bert : “Fanonganam-panjakana no natao” | NewsMada
Loholona Velontsara Paul Bert : “Fanonganam-panjakana no natao”
“Fanonganam-panjakana no natao. Satria nanazava ny filoha Rakotomanana Honoré fa hoe tsy nametra-pialana izy ary tsy nisy nanongana”, hoy ny loholona Mapar, Velontsara Paul Bert, teny Anosy, afakomaly, momba ny fitsaharan’ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotomanana Honoré, amin’ny asany.
Izay fametraham-pialana na fanonganana amin’ny toerany ny loholona na mpikamban’ny birao maharitra izay ihany no voafaritry ny lalàna sy ny fitsipika anatin’ny Antenimierandoholona. Tsy izany ny zava-niseho afakomaly. Izay no mahatonga anay milaza hoe fanonganam-panjakana tsotra izao iny.
Tonga dia notanterahina ny fifidianana filoha vaovaon’ny Antenimierandoholona. Araka ny tenin’ny filoha Rakotomanana Honoré hoe banga ny toeran’ny filoha. Nefa tsy nisy ny fivoriana itambarambe, izay tokony ho nandaniana ny fandaharam-potoana amin’izay hanaovana ny fifidianana izay.
Raha ny tokony ho izy, apetraka ora iray faharafahakeliny mialoha ny fifidianana ny firotsahan-kofidina. Tsy nisy izany, fa natao amboletra ny fifidianana. “Tsy araka ny lalàmpanorenana sy ny fitsipika anatin’ny Antenimierandoholona ny fifidianana”, hoy ny loholona Velontsara Paul Bert.
Tsy nisy ny fifanajana tamin’ny raharaha
“Na nahimpon’ny filoha teo aloha aza ny nitsahatra tamin’ny asany, anisan’ny mba nifidy azy izahay”, hoy kosa ny loholona Tim, Ramalason Olga. Tokony ho nisy fifanajana, mba nampahafantarina izy ireo ny amin’ny fikasan’ny filoha. Tampoka tamin’izy ireo izany, nahavariana…
“Ny niantsoana anay, misy fanambarana hataon’ny filohan’ny Antenimierandoholona”, hoy izy. Nefa nony tonga izy ireo, hanao fifidianana… Raha ny tokony ho izy, ny ao anatin’ny fitsipika anatiny: lanin’ny birao maharitra aloha ny fandaharam-potoana. Avy eo, lanin’ny fivorian’ny filoha izany. Ary lanin’ny loholona izany vao tanterahina ny fifidianana, araka ny fanazavany.
Izany ny fanjakana tan-dalàna? Vao mainka amin’ny fifidianana… Efa hita ny vita tamin’ny fifidianana kaominaly sy ny fifidianana loholona.